Show All Most Popular Cutlery Appetizer Salad Soup BBQ & Satay Special Fish Stir Fried & Curry Side Dish Vegetables Rice & Noodle Chef Recommendation One Portion Dim Sum (Chicken) Dim Sum (Fish) Dim Sum (Pork) Dim Sum (Prawn) Drink Flavoured Cappuccino Fresh Brew Coffee Special Tea Frappe Freeze Italian Soda Smoothies
Stir Fried & Curry
Dim Sum (Chicken)
Dim Sum (Fish)
Dim Sum (Pork)
Dim Sum (Prawn)
Radio Station Rd, Near Yangon International Airport, Yangon, MM Mingaladon Before Airport
Sunday09:30 - 19:00
Sunday09:30 -7PM
Monday09:30 -7PM
Tuesday09:30 -7PM
Wednesday09:30 -7PM
Thursday09:30 -7PM
Friday09:30 -7PM
Saturday09:30 -7PM
S10. Shrimp with Seaweed (ပုဇှနျရညှေိ)(ပုဇွန်ရေညှိ)
S11. Steamed Clear Shrimp (ပုဇှနျနိုငျလှနျ)(ပုဇွန်နိုင်လွန်)
C7. Chicken Feet (ကွကျခွထေောကျ)(ကြက်ခြေထောက်)
P8. Pork Spare Ribs (ဝကျနံရိုး)(ဝက်နံရိုး)
P18. Steamed Pork Wanton (ဝကျသားပေါငျး)(ဝက်သားပေါင်း)
H5. Fried Kailan with Crispy Pork (ဝကျခေါကျကိုကျလနျကွျော)(ဝက်ခေါက်ကိုက်လန်ကြော်)
C3. Century Egg with Chicken (ကွကျဆေးဘဲဥ)(ကြက်ဆေးဘဲဥ)
S15. Fried Shrimp Wanton (ပုဇှနျလုံးကွျော)(ပုဇွန်လုံးကြော်)
C5. Chicken Dumpling (ကွကျပေါကျစီ)(ကြက်ပေါက်စီ)
D5. Satay (ဆာတေး)(ဆာတေး)
A1. TYK Appetizer (ခံတှငျးနူးအစုံကွျော)(ခံတွင်းနူးအစုံကြော်)
A2. Fried Cattle Fish with Garlic & Chilli (ကငျးမှနျစပါယျရှယျကွျော)(ကင်းမွန်စပါယ်ရှယ်ကြော်)
A3. Deep Fried Soft-Shell Crabs (ဂဏနျးပြော့ အကွှပျကွျော)(ဂဏန်းပျော့ အကြွပ်ကြော်)
A4. Deep Fried Butter Fish (ငါးမွငျးကွျော)(ငါးမြင်းကြော်)
A5. Deep Fried Prawn Pancake (ပုဇှနျမှကွျော)(ပုဇွန်မွကြော်)
A6. Deep Fried Meat Slice (အသားခြောငျးကွျော)(အသားချောင်းကြော်)
A7. Deep Fried Pickled Pork (ဝကျသားခြဥျကွျော)(ဝက်သားချဉ်ကြော်)
A8. Deep Fried Wonton (ဖကျထုပျကွျော)(ဖက်ထုပ်ကြော်)
A9. Deep Fried Chicken Skin (ကွကျရခှေံကွျော)(ကြက်ရေခွံကြော်)
A10. Fried Fish Cake (ငါးဖယျကွျော)(ငါးဖယ်ကြော်)
A11. Deep Fried Silver Pomfret (ငါးမုတျအကွှပျကွျော)(ငါးမုတ်အကြွပ်ကြော်)
A12. Prawn Tempura (ပုဇှနျတနျပူရာ)(ပုဇွန်တန်ပူရာ)
A13. Mixed Vegetables Tempura (အသီးအရှကျစုံတနျပူရာ)(အသီးအရွက်စုံတန်ပူရာ)
A14. Butted Bread Crumb Chicken (ကွကျကွျော)(ကြက်ကြော်)
A15. Deep Fried Pork Spare Ribs (ဝကျနံရိုးကွျော)(ဝက်နံရိုးကြော်)
A16. Salted Chicken Wings with Chilli (ကွကျတောငျပံဆားငရုပျသီးကွျော)(ကြက်တောင်ပံဆားငရုပ်သီးကြော်)
A17. Special Papaya Salad (စပါယျရှယျ သင်ျဘောသီးထောငျး)(စပါယ်ရှယ် သင်္ဘောသီးထောင်း)
A18. Deep Fried Pork Instestine with Garlic & Chilli (ဝကျအူလိမျကွကျသှနျဖွူကွျော)(ဝက်အူလိမ်ကြက်သွန်ဖြူကြော်)
A19. Steamed Meat (အသားပေါငျး)(အသားပေါင်း)
A20. Deep Fried Shrimps (ပုဇှနျဆိတျကွျော)(ပုဇွန်ဆိတ်ကြော်)
B1. Deep Fried Cat Fish Salad (ငါးခူမှကွျောသုပျ)(ငါးခူမွကြော်သုပ်)
B2. Spicy Salad with Prawn, Squid & Pork (ယိုးဒယားသူငယျခငျြးသုံးယောကျ)(ယိုးဒယားသူငယ်ချင်းသုံးယောက်)
B3. Spicy Fresh Prawn Salad (ပုဇှနျအစိမျးသုပျ)(ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်)
B4. Spicy Prawn & Kailan Salad (ပုဇှနျနှငျ့ကိုကျလနျခြဥျငံစပျသုပျ)(ပုဇွန်နှင့်ကိုက်လန်ချဉ်ငံစပ်သုပ်)
B5. Spicy Pork Liver Salad (ဝကျသဲသုပျ)(ဝက်သဲသုပ်)
B6. Minced with Meat Salad (အသားစငျးကောသုပျ)(အသားစင်းကောသုပ်)
B7. Spicy Glass Noodle Salad (ယိုးဒယားပဲကွာဇံသုပျ)(ယိုးဒယားပဲကြာဇံသုပ်)
B8. Spicy Grilled Meat Salad (အသားကငျသုပျ)(အသားကင်သုပ်)
B9. Special Meat Ball Salad (အသားလုံးသုပျ)(အသားလုံးသုပ်)
B10. Thai Papaya Salad (ယိုးဒယားသင်ျဘောသီးထောငျး)(ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်း)
B11. Thai Style Spicy Mushroom Salad (မှိုခြဥျငံစပျသုပျ)(မှိုချဉ်ငံစပ်သုပ်)
B12. Thai Style Spicy Seafood Salad (ပငျလယျစာသုပျ)(ပင်လယ်စာသုပ်)
C1. Traditional Thai Tom Yam Soup (ပုဇှနျတုနျယမျးဟငျးရညျ)(ပုဇွန်တုန်ယမ်းဟင်းရည်)
C2. Thai Style Seafood Hot Basil Soup (ယိုးဒယားပငျလယျစာပငျစိမျးဟငျးရညျ)(ယိုးဒယားပင်လယ်စာပင်စိမ်းဟင်းရည်)
C3. Thai Mixed Vegetables Soup with Shrimp (ပုဇှနျလယျသမားဟငျးရညျ)(ပုဇွန်လယ်သမားဟင်းရည်)
C4. Hot & Sour Chicken Feet Soup (ကွကျခွထေောကျခြဥျစပျဟငျးရညျ)(ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
C5. Hot & Sour Pork Spare Rib Soup (ဝကျနံရိုးခြဥျစပျဟငျးရညျ)(ဝက်နံရိုးချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
C6. Braised Beef Soup (အမဲသားနှပျဟငျးရညျ)(အမဲသားနှပ်ဟင်းရည်)
C7. Cleared Soup with Seaweed & Vermicelli (ပဲကွာဇံနှငျ့ ရညှေိဟငျးရညျ)(ပဲကြာဇံနှင့် ရေညှိဟင်းရည်)
D1. Grilled River King Prawn (1 Pc) (ပုဇှနျကငျ)(ပုဇွန်ကင်)
D2. BBQ Chicken (ကွကျကငျမှေး)(ကြက်ကင်မွှေး)
D3. BBQ Pork (ဝကျဂုတျသားဒုတျထိုးကငျ)(ဝက်ဂုတ်သားဒုတ်ထိုးကင်)
D4. Grilled Pork Shoulder & Fresh Kailan (ဝကျဂုတျသားပွားကငျ)(ဝက်ဂုတ်သားပြားကင်)
D6. Grilled Meat Ball (အသားလုံးကငျ)(အသားလုံးကင်)
E1. Steamed Seabass with Oyster Sauce (ကက်ကတဈခရုဆီပေါငျး)(ကက္ကတစ်ခရုဆီပေါင်း)
E2. Steamed Seabass with Salted Plum Sauce (ကက်ကတဈဆားငံသီးပေါငျး)(ကက္ကတစ်ဆားငံသီးပေါင်း)
E3. Steamed Seabass with Lemon & Chilli Sauce (ကက်ကတဈငါးသံပုရာပေါငျး)(ကက္ကတစ်ငါးသံပုရာပေါင်း)
E4. Steamed Silver Pomfret with Oyster Sauce (ငါးမုတျခရုဆီပေါငျး)(ငါးမုတ်ခရုဆီပေါင်း)
E5. Deep Fried Whole Seabass with Tamarind Sauce (ကက်ကတဈမနျကညျြးသီးပေါငျး)(ကက္ကတစ်မန်ကျည်းသီးပေါင်း)
E6. Deep Fried Seabass with Chilli Paste (ကက်ကတဈ ငရုပျနှဈခကျြ)(ကက္ကတစ် ငရုပ်နှစ်ချက်)
E7. Butter Fish Curry with Chilli Paste (ငါးမွငျးငရုပျနှဈခကျြ)(ငါးမြင်းငရုပ်နှစ်ချက်)
E8. Spicy Butter Fish with Thai Herb & Spices (ငါးမွငျးအစပျခကျြ)(ငါးမြင်းအစပ်ချက်)
E9. Deep Fried Seabass with Spicy Pomelo Salad (ကက်ကတဈအကွှပျကွျောနှငျ့ ကြှဲကောသီးသုပျ)(ကက္ကတစ်အကြွပ်ကြော်နှင့် ကျွဲကောသီးသုပ်)
E10. Spicy Crispy Garden Whole Fish (စပါယျရှယျ ကက်ကတဈခြဥျငံစပျသုပျ)(စပါယ်ရှယ် ကက္ကတစ်ချဉ်ငံစပ်သုပ်)
E11. Deep Fried Seabass (ကက်ကတဈအကွှပျကွျော)(ကက္ကတစ်အကြွပ်ကြော်)
F1. Black Pepper Soft Shell Crab (ဂဏနျးပြော့ငရုပျကောငျး)(ဂဏန်းပျော့ငရုပ်ကောင်း)
F2. Soft Shell Crab with Curry Powder (ဂဏနျးပြော့ကွကျဥနှဈခကျြ)(ဂဏန်းပျော့ကြက်ဥနှစ်ချက်)
F3. Hot & Sour Soft Shell Crab (ဂဏနျးပြော့ခြဥျစပျ)(ဂဏန်းပျော့ချဉ်စပ်)
F4. Fried Sweet & Sour (ခြိုခြဥျကွျော)(ချိုချဉ်ကြော်)
F5. Roasted Pork Curry with Kailan Special Gravy (ဝကျသားနီအခြိုဆော့)(ဝက်သားနီအချိုဆော့)
F6. Stir Fried Squid with Chilli Paste (ပွညျကွီးငါးအစပျခကျြ)(ပြည်ကြီးငါးအစပ်ချက်)
F7. Thai Green Curry with Meat (အုနျးနို့အစိမျးရောငျခကျြ-ထိုငျးမုနျ့ဟငျးခါး)(အုန်းနို့အစိမ်းရောင်ချက်-ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါး)
(Served with rice noodle)
F8. Grilled Chicken Curry with Thai Herb & Spices (ကွကျကငျပွနျခကျြ)(ကြက်ကင်ပြန်ချက်)
F9. Thai Jungle Style Spicy Chicken Curry (ကွကျသားတောခကျြ)(ကြက်သားတောချက်)
F10. Cat Fish Curry with Tomato & Chilli Paste (ငါးခူနှငျ့ ခရမျးခြဥျငရုပျသီးခကျြ)(ငါးခူနှင့် ခရမ်းချဉ်ငရုပ်သီးချက်)
F11. Meat with Thai Basil Leaves (ပငျစိမျးခကျြ)(ပင်စိမ်းချက်)
F12. Stir Fried Meat with Long Bean & Chilli Paste (အသားနှငျ့ ပဲသီးအစပျခကျြ)(အသားနှင့် ပဲသီးအစပ်ချက်)
F13. Thai Style Prawn Curry with Concinna Leave (ပုဇှနျဆူးပုပျရှကျခကျြ)(ပုဇွန်ဆူးပုပ်ရွက်ချက်)
F14. Thai Red Curry (အုနျးနို့အနီရောငျခကျြ)(အုန်းနို့အနီရောင်ချက်)
F15. Thai Style Stewed Pork Legs with Kailan (ဝကျစတူးခကျြ)(ဝက်စတူးချက်)
F16. Stewed Pork Spare Rib with Kailan (ဝကျနံရိုးစတူး)(ဝက်နံရိုးစတူး)
F17. Spicy Chicken & Bamboo Shoot Curry (ကွကျသားမြှဈအစပျခကျြ)(ကြက်သားမျှစ်အစပ်ချက်)
F18. Sweet & Sour Meat Minced with Japan Tofu (ဂပြနျတိုဟူးအခြိုခကျြ)(ဂျပန်တိုဟူးအချိုချက်)
F19. Stir Fried Prawn with Tom Yam Paste (ပုဇှနျတုနျယမျးငရုပျနှဈအစပျခကျြ)(ပုဇွန်တုန်ယမ်းငရုပ်နှစ်အစပ်ချက်)
F20. Stir Fried Cashew Nut (ကွကျသီဟိုလျစကွေ့ျော)(ကြက်သီဟိုလ်စေ့ကြော်)
F21. Braised Beef with Kailan and Brown Sauce (အမဲသားနှပျ နှငျ့ အညိုရောငျဆောဈ့)(အမဲသားနှပ် နှင့် အညိုရောင်ဆောစ့်)
F22. Spicy Century Egg and Meat with Thai Hot Basil (ဆေးဘဲဥအသားပငျစိမျးခကျြ)(ဆေးဘဲဥအသားပင်စိမ်းချက်)
F23. Stir Fried Prawn with Coconut Milk and Panang Chill (ပုဇှနျအုနျးနို့မဆလာ)(ပုဇွန်အုန်းနို့မဆလာ)
F24. Meat with Ginger Sauce (အသားဂငျြးမှေးအခြိုခကျြ)(အသားဂျင်းမွှေးအချိုချက်)
G1. Spicy Shrimp Paste (ယိုးဒယားငါးပိထောငျး)(ယိုးဒယားငါးပိထောင်း)
Served with shrimp paste, dry with deep fried butter fish, boiled long bean, cauliflower, cucumber, fried omelet with concinna leaves
G2. Grilled Fish Chilli Paste (ငါးကငျငါးပိထောငျး)(ငါးကင်ငါးပိထောင်း)
Served with grilled fish paste, cauliflower dip with boiled egg and long bean cabbage, cucumber
G3. Spicy Meat and Tomato Dip (အသားစငျးကောငါးပိခကျြ)(အသားစင်းကောငါးပိချက်)
Served with deep fried chicken skin, cucumber, cauliflower, cabbage, boiled long bean (Choice of Chicken or Pork)
H1. Fried Mixed Vegetables (သီးရှကျစုံကွျော)(သီးရွက်စုံကြော်)
H2. Stir Fried Snow Pea with Mushroom (ရှပေဲသီးမှိုကွျော)(ရွှေပဲသီးမှိုကြော်)
H3. Fried Kailan, Mushroom, Carrot and Chinese Cabbage (လေးရောငျခွယျကျောရညျ)(လေးရောင်ခြယ်ကော်ရည်)
H4. Fried Watercress (ကနျစှနျးမီးတောကျ)(ကန်စွန်းမီးတောက်)
H6. Fried Kailan with Salted Dry Fish (ငါးပုပျပွားကိုကျလနျ)(ငါးပုပ်ပြားကိုက်လန်)
H7. Fried Kailan & Mushroom with Oyster Sauce (ကိုကျလနျခရုဆီမှိုမှေး)(ကိုက်လန်ခရုဆီမှိုမွှေး)
H8. Stir Fried Asparagus with Prawn (ကညှတျပုဇှနျအခြိုကွျော)(ကညွတ်ပုဇွန်အချိုကြော်)
H9. Fried Chayote Leaves with Oyster Sauce (ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော)(ဂေါ်ရခါးညွန့်ကြော်)
H10. Fried Cabbage with Oyster Sauce (ဂျေါဖီထုပျကွျော)(ဂေါ်ဖီထုပ်ကြော်)
H11. Fried Bean Sprout with Crispy Pork Belly (ဝကျခေါကျပဲပငျပေါကျကွျော)(ဝက်ခေါက်ပဲပင်ပေါက်ကြော်)
H12. Fried Cabbage with Egg (ဂျေါဖီနှငျ့ကွကျဥကွျော)(ဂေါ်ဖီနှင့်ကြက်ဥကြော်)
i1. Fried Rice with Pineapple and Meat (နာနတျသီးထမငျးကွျော)(နာနတ်သီးထမင်းကြော်)
i2. Fried Rice with Meat (ထမငျးကွျော)(ထမင်းကြော်)
i3. Fried Rice with Thai Chilli Paste and Meat (ယိုးဒယားငရုပျနှဈထမငျးကွျော)(ယိုးဒယားငရုပ်နှစ်ထမင်းကြော်)
i4. Fried Rice with Shrimp Paste with Meat (ငပိထမငျးကွျော)(ငပိထမင်းကြော်)
i5. Fried Rice with Tom Yam Paste with Meat (တုနျယမျးအနှဈထမငျးကွျော)(တုန်ယမ်းအနှစ်ထမင်းကြော်)
i6. Fried Rice with Thai Ngape Paste with Meat (ယိုးဒယားငပိထောငျးထမငျးကွျော)(ယိုးဒယားငပိထောင်းထမင်းကြော်)
i7. Rice Noodle with Meat (Pad Thai)
i8. Fried Flat Noodle Black Soy Sauce with Meat (ဆနျပွားကွျော)(ဆန်ပြားကြော်)
i9. Braised Beef Noodle Soup (အမဲသားခေါကျဆှဲပွုတျ)(အမဲသားခေါက်ဆွဲပြုတ်)
i10. Cleared Noodle Soup with Meat (ခေါကျဆှဲပွုတျ)(ခေါက်ဆွဲပြုတ်)
i11. Tom Yam Noodle Soup with Meat (တုနျယမျးခေါကျဆှဲ)(တုန်ယမ်းခေါက်ဆွဲ)
i12. Gravy Flat Noodle with Meat (ဆနျပွားကျောရညျ)(ဆန်ပြားကော်ရည်)
i13. Cleared Noodle Soup with Roasted Pork (ဝကျသားနီခေါကျဆှဲ)(ဝက်သားနီခေါက်ဆွဲ)
J1. Thai Style Seafood Hot Plate (ပငျလယျစာဒယျအိုးပူ)(ပင်လယ်စာဒယ်အိုးပူ)
J2. Steamed Prawn with Glass Noodle (ပုဇှနျပဲကွာဇံပေါငျး)(ပုဇွန်ပဲကြာဇံပေါင်း)
J3. Deep Fried Seabass Salad (ကက်ကတဈစငျးကောသုပျ)(ကက္ကတစ်စင်းကောသုပ်)
J4. Deep Fried River King Prawn with Garlic & Chilli (ပုဇှနျကွကျသှနျဖွူကွျော)(ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူကြော်)
J5. Steamed Mussel Served with Homemade Lemon Sauce (ခရုသံပုရာပေါငျး)(ခရုသံပုရာပေါင်း)
J6. Stuffed with Minced Meat (ကငျးမှနျအစာသှတျပေါငျး)(ကင်းမွန်အစာသွတ်ပေါင်း)
J7. Deep Fried Steamed Chicken with Ginger (ကွကျပေါငျးကွျော)(ကြက်ပေါင်းကြော်)
J8. Steamed Seafood with Coconut Milk (ပငျလယျစာအုနျးနို့ပေါငျး)(ပင်လယ်စာအုန်းနို့ပေါင်း)
J9. Steamed Cattle Fish with Spicy Lemon Sauce (ကငျးမှနျသံပုရာပေါငျး)(ကင်းမွန်သံပုရာပေါင်း)
J10. Mild Spicy Minced Meat (အသားစငျးကောအစပျကွျော)(အသားစင်းကောအစပ်ကြော်)
J11. Steamed Pork Shoulder with Spicy Lemon Sauce (ဝကျဂုတျသားသံပုရာပေါငျး)(ဝက်ဂုတ်သားသံပုရာပေါင်း)
K1. Meat and Basil Leave with Rice (ပငျစိမျးထမငျးဖွူ)(ပင်စိမ်းထမင်းဖြူ)
K2. Roasted Pork Curry with Rice (ဝကျသားနီထမငျးဖွူ)(ဝက်သားနီထမင်းဖြူ)
K3. Stir Fried Pork Belly & Kailan with Rice (ဝကျခေါကျကိုကျလနျထမငျးဖွူ)(ဝက်ခေါက်ကိုက်လန်ထမင်းဖြူ)
K4. Stewed Pork with Rice (ဝကျစတူးထမငျးဖွူ)(ဝက်စတူးထမင်းဖြူ)
K5. Spicy Meat and Long Bean with Rice (ပဲသီးအစပျခကျြထမငျးဖွူ)(ပဲသီးအစပ်ချက်ထမင်းဖြူ)
K6. Stir Fried Tom Yam Prawn with Rice (တုနျယမျးအနှဈခကျြထမငျးဖွူ)(တုန်ယမ်းအနှစ်ချက်ထမင်းဖြူ)
K7. Fried Meat Garlic with Rice (ကွကျသှနျဖွူကွျောနှငျ့ထမငျးဖွူ)(ကြက်သွန်ဖြူကြော်နှင့်ထမင်းဖြူ)
K8. Fried Mixed Vegetables with Rice (သီးရှကျစုံကွျောနှငျ့ထမငျးဖွူ)(သီးရွက်စုံကြော်နှင့်ထမင်းဖြူ)
K9. Stewed Pork Spare Rib with Rice (ဝကျနံရိုးပေါငျးထမငျးဖွူ)(ဝက်နံရိုးပေါင်းထမင်းဖြူ)
C1. Chicken Kailan (ကွကျကိုကျလနျ)(ကြက်ကိုက်လန်)
C2. Bean Curd Topped with Chicken (ကွကျသားပဲပွား)(ကြက်သားပဲပြား)
C4. Steamed Chicken Clear Wanton (ကွကျနိငျလှနျဖကျထုပျ)(ကြက်နိင်လွန်ဖက်ထုပ်)
C6. Steamed Chicken in Pan Noodle (ကွကျညှပျလိပျ)(ကြက်ညှပ်လိပ်)
C8. Chicken Rolled in Pan Egg (ကွကျဥလိပျရှညျ)(ကြက်ဥလိပ်ရှည်)
C9. Steamed Chicken Wanton (ကွကျသားပေါငျး)(ကြက်သားပေါင်း)
C10. Chicken in Bean Plate (ကွကျပဲလိပျ)(ကြက်ပဲလိပ်)
C11. Chicken Topped with Crab Meat Stick (ကွကျဂဏနျးအသားတု)(ကြက်ဂဏန်းအသားတု)
C12. Steamed Chicken Sausage (ကွကျအူခြောငျး)(ကြက်အူချောင်း)
F1. Fish with Seaweed (ငါးရညှေိ)(ငါးရေညှိ)
F2. Fish with Mushroom (ငါးအသားမှို)(ငါးအသားမှို)
F3. Fish with Seaweed Hair (ငါးပိုကျကှနျ)(ငါးပိုက်ကွန်)
F4. Jade Fish (ငါးကြောကျစိမျး)(ငါးကျောက်စိမ်း)
F5. Fish Ball with Cauliflower (ငါးဖယျလုံးပနျးပှငျ့)(ငါးဖယ်လုံးပန်းပွင့်)
F6. Fish Pu Tin (ငါးပူတငျး)(ငါးပူတင်း)
F7. Steamed Feather Black Fish (ညှပျငါးဖယျပေါငျး)(ညှပ်ငါးဖယ်ပေါင်း)
F8. Fish with Chicken Sausage (ငါးသားကွကျအူခြောငျးလိပျ)(ငါးသားကြက်အူချောင်းလိပ်)
F9. Fried Fish with Pastry (ငါးအသားလိပျကွျော)(ငါးအသားလိပ်ကြော်)
O1. Fried Spring Roll (ကျောပွနျ့ကွျော)(ကော်ပြန့်ကြော်)
O2. Black Bean Dumpling (ပဲပေါကျစီ)(ပဲပေါက်စီ)
O3. Cream Dumpling (ခရငျမျပေါကျစီ)(ခရင်မ်ပေါက်စီ)
O4. Fried Cream Dumpling (ခရငျမျပေါကျစီကွျော)(ခရင်မ်ပေါက်စီကြော်)
O5. Fried Sesame Ball (နှမျးလုံးကွျော)(နှမ်းလုံးကြော်)
O6. Fried Black Bean in Sticky Rice (ပဲကောကျညှငျးကွျော)(ပဲကောက်ညှင်းကြော်)
P1. Pork in Mustard Leaf (ဝကျမုနျညှငျး)(ဝက်မုန်ညှင်း)
P2. Pork in Green Pepper (ဝကျငရုတျပှ)(ဝက်ငရုတ်ပွ)
P3. Steamed Triple Pork (ဝကျသားသုံးပှငျ့ဆိုငျ)(ဝက်သားသုံးပွင့်ဆိုင်)
P4. Steamed Pork Clear Wanton (ဝကျနိုငျလှနျဖကျထုပျ)(ဝက်နိုင်လွန်ဖက်ထုပ်)
P5. Three Lovely Friend (သူငယျခငျြးသုံးယောကျ)(သူငယ်ချင်းသုံးယောက်)
P6. Quail Egg with Pork Colon (ငုံးဥ ဝကျအူမ)(ငုံးဥ ဝက်အူမ)
P7. Pork Quail Egg Wanton (ဝကျငုံးဥ ဖကျထုပျ)(ဝက်ငုံးဥ ဖက်ထုပ်)
P9. Butterfly Clear Pork (ဝကျနိုငျလှနျလိပျပွာ)(ဝက်နိုင်လွန်လိပ်ပြာ)
P10. Pork Topped with Squid (ဝကျပွညျကွီးငါးအစာသှပျ)(ဝက်ပြည်ကြီးငါးအစာသွပ်)
P11. Pork with Golden Egg (ဝကျသားဘဲဥအငံ)(ဝက်သားဘဲဥအငံ)
P12. Pork Rolled in Pan Egg (ဝကျကွကျဥလိပျ)(ဝက်ကြက်ဥလိပ်)
P13. Pork Dumpling (ဝကျသားပေါကျစီ)(ဝက်သားပေါက်စီ)
P14. Pork Clear Dumpling (ဝကျနိုငျလှနျပေါကျစီ)(ဝက်နိုင်လွန်ပေါက်စီ)
P15. Steamed Pork Wanton (ဝကျဖကျထုပျအစိုပေါငျး)(ဝက်ဖက်ထုပ်အစိုပေါင်း)
P16. Roasted Pork Dumpling (ဝကျသားကငျပေါကျစီ)(ဝက်သားကင်ပေါက်စီ)
P17. Steamed & Fried Pork Wanton (ဝကျဖကျထုပျကွျောပေါငျး)(ဝက်ဖက်ထုပ်ကြော်ပေါင်း)
S1. Shrimp Balls with Cauliflower (ပုဇှနျလုံးပနျးပှငျ့)(ပုဇွန်လုံးပန်းပွင့်)
S2. Shrimp with Tofu (ပုဇှနျပဲပွား)(ပုဇွန်ပဲပြား)
S3. Streamed Minced Shrimp (ပုဇှနျပေါငျး)(ပုဇွန်ပေါင်း)
S4. Steamed Shrimp Ball with Chicken (ကွကျပုဇှနျလုံး)(ကြက်ပုဇွန်လုံး)
S5. Steamed Shrimp Wanton (ပုဇှနျဖကျထုပျပေါငျး)(ပုဇွန်ဖက်ထုပ်ပေါင်း)
S6. Golden Prawn (ပုဇှနျရှရေောငျ)(ပုဇွန်ရွှေရောင်)
S7. Prawn Tail Neutralize (ပုဇှနျမွှီးထောငျ)(ပုဇွန်မြှီးထောင်)
S8. Pork Shrimp & Baby Corn (ဝကျပုဇှနျပွောငျးဖူး)(ဝက်ပုဇွန်ပြောင်းဖူး)
S9. Steamed Crab Thumb with Shrimp & Mush (မှိုပုဇှနျဂဏနျးပေါငျး)(မှိုပုဇွန်ဂဏန်းပေါင်း)
S12. Special Shrimp with Rice Noodle (ပုဇှနျစပါယျရှယျညှပျ)(ပုဇွန်စပါယ်ရှယ်ညှပ်)
S13. Fried Shrimp Spring Roll (ပုဇှနျကျောပွနျ့ကွျော)(ပုဇွန်ကော်ပြန့်ကြော်)
Green Mint Cappuccino
Almond Roca Cappuccino
Today Brew Coffee
Cafe Aulait Coffee
Oreo Cookies Frappe
Oreo Chocolate Freeze
Green Mint Oreo Freeze
Special Lime Soda
Blue Oceam Soda
Blue Curacao Soda
Green Apple Smoothies
Berry Island Smooties